Magacyada iyo sawirrada 15-ka nin ee lagu tuhmay dilka Jamal Khaashuqji – Wakaaladda Wararka Hiilnews
By admin on 19/10/2018 No Comment
Jimco, October, 19, 2018(HNN) Warbaahinta dalka Turkiga ayaa shaacisay magacyada 15 ruux oo u dhalatay Sucuudiga, oo ay saraakiisha xukuumadda Ankara ku tuhunsanyihiin iney ku lug leeyihiin maqnaansha Jamal Khaashuqji, oo ah wariye caan ah oo u dhashay dalka Sucuudiga, mucaaradna ku ahaa xukuumadda, kaasoo markii dad ugu war dambeysay galay qunsuliyadda Sucuudiga ee magaalada Istambul, taariikhdu markey ahayd 2dii bishan Oktoobar.
Saalax Muxammad A Tubaigy, oo ah 47 jir
Maahir Cabdulcasiis M Mutreb, oo ah 47 jir
Maahir Cabdulcasiis M Mutreb, oo ah 47 jir, waa garoonka Istanbul 2-dii Oktoobar 2018 AFP
Warbaahinta Turkiga ayaa tabisay in Mr Mutreb uu Istambul ku tagay diyaarad khaas ah, ayna isla socdeen Dr Tubaigy.
Cabdulcasiis Maxamed M Alhawsawi, oo ah 31 jir
Muuqaalka Jamaal Khaashoqji oo sii galaya qunsuliyadda
Daahir Qaalib Al Xarbi , oo ah 39 jir
Daahir Qaalib Al Xarbi , oo ah 39 jir AFP
Maxamed Sacad Al Sahraani, oo ah 30 jir
Maxamed Sacad Al Sahraani, oo ah 30 jir AFP
Khaalid Cayad Al Cuteyba , oo ah 30 jir
Khaalid Cayad Al Cuteyba 30 Jir ah AFP
Naa’if Xasan Al Cariifi, oo ah 32 jir
Mustafa Maxamed Al Madani , oo ah 57 jir
Mishcal Sacad Al Bostani, oo ah 31 jir
Shabakada MenoM3ay ayaa nin magacaas leh ku sheegtay inuu ka tirsanyahay ilaalada boqortooyada Sucuudiga.
Mr Al bostani ayaa garoonka Istambul lagu arkay 2-dii bishii Oktoobar, wuxuuna dib ugu laabtay diyaarad khaas ah.
Waliid Cabdullaahi Al Sehri , oo ah 38 jir
Nin magacaas leh ayaa la sheegay inuu ka tirsanyahay ciidamada ee Sucuudiga.
Mr Alsehri ayaa Istambul ku tagay diyaarad ganacsi, wuxuuna ku noqday diyaarad ganacsi.
Mansuur Cusmaan Abaa Xuseen, oo ah 46 jir
Nin magacan leh ayaa ayay MenoM3ay ku sheegtay inuu la shaqeeyo sirdoonka dalka Sucuudiga.
Mr Aba Xuseen ayaa Istambul ku tagay diyaarad ganacsi wuxuuna ku laabtay diyaar kale oo ganacsi.
Fahad Shabib Al balawi, oo ah 33 jir
Nin magacan leh ayaa ayay MenoM3ay ku sheegtay inuu ka tirsanyahay ilaalada boqortooyada Sucuudiga.
Mr Albalawi ayaa Istambul ku tagay diyaarad ganacsi wuxuuna ku laabtay diyaar kale oo ganacsi.
Badar Lafi Al Cuteyba , oo 45 jir ah
Nin isla magacaas leh ayay MenoM3ay ku sheegtay inuu yahay Janaraal ka tirsan sirdoonka Sucuudiga.
Mr Al Cuteyba ayaa Istambul ku tagay diyaarad ganacsi wuxuuna ku laabtay diyaar kale oo ganacsi.
Sayf Sacad Al Qaxdhaani , oo ah 45 jir
Nin isla magacaas leh ayay MenoM3ay ku sheegtay shaqaalaha dhaxal sugaha Boqortooyada Sucuudiga, sida laga soo xigtay wargeyska Washington Post.
Mr Al Qaxdhaani ayaa istambul ku tagay diyaarad khaas ah, wuxuuna ku laabtay diyaarad ganacsi.
Turki Musarif Al Sehri , oo ah 36 jir
Ninkan ayaa istambul ku tagay diyaarad ganacsi, wuxuuna ku laabtay diyaarad kale oo ganacsi.
Magacyada iyo sawirrada 15-ka nin ee lagu tuhmay dilka Jamal Khaashuqji added by admin on 19/10/2018